MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYGA WOLAMUTE - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyga Wolamute
Wolf Wolf (Gray Wolf) / eeyaha Alaskan Isku-dhafan ee Isku-dhafan
Kayle the Wolamute (Alaskan Malamute / Timber Wolf hybrid) oo jira 1 sano
Wolamute ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Wolf alwaax sidoo kale loo yaqaan Grey Wolf iyo Alaskan Malamute . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Qof kasta oo leh Wolf Hybrid waa inuu qaataa waqti dheeri ah si uu u barto dabeecadaha dabiiciga ah iyo dabeecadda . Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
Zeke the Wolamute oo 3 jir ah— 'Tani waa Zeke oo ah kan wax cuna. (Maaddaama 9 jirkeygu tixraacayo isaga) Isagu waa saaxiibka ugu fiican ee nin codsan karo. Sida saaxiibada badankood wuu kaa deyn karaa waqti ka waqti. Xaqiiqdii wuxuu ku dhacaa wehelka marka loo eego qaybta xayawaanka. Qof kasta oo i weydiiya lahaanshaha yeeyga waxaan isku dayaa inaan caddeeyo. Waxaan ku qaatay sanad ka badan cidlada aniga iyo eygeyga. Illaa aad diyaar u tahay inaad sameyso ballanqaad noocan ah ha dhibin. '
Kani waa Laika, iskutallaab Wolf / Malamute oo gabi ahaanba qurux badan! Iyadu waa wehel la yaab leh in kasta oo ay si badheedh ah u badheedho oo xirato, iyadu waa xayawaan macaan oo wanaagsan.
6 toddobaad puppy puppy
Logan the Wolamute oo 2 jir ah— 'Isagu waa iskutallaabta Malamute / Timber Wolf, waxaanan aaminsanahay inuu yahay noolaha ugu quruxda badan ee aan abid leeyahay .... Wuxuu ku saabsan yahay 102 lbs. eey aad u xoog badan, oo u af badan sidii jeedal! Wuxuu ku qaatay tababar dhammeystiran 'Alpha Paws' waqooyiga Ontario ee u dhow Barrie, taas oo u eg xerada xirashada eeyga. Ninka naga caawiyey in aan tababarno Logan oo ku takhasusay eeyaha dhibaatada leh oo leh rabitaanno aad u xoog badan. Waxaan kugula talinayaa barnaamijkan qof kasta oo eeygaaga uu ku dhici doono isbeddel kaas oo kaa yaabin doona!
Tababarkiisa kadib, Logan hadda waa mid aad u ilaaliya oo jecel qoyskeena. Gaar ahaan naftayda iyo hooyaday. Wuu ogyahay cidda guriga ku jirta, laakiin si adag ayuu annaga nooga ilaaliyaa kuwa u muuqda kuwa tuhmaya. Gan _ ^ Logan xitaa wuxuu badbaadiyay noloshayda 6 bilood ka hor. Waxaan ku margamayay gabal cunno ah, kaligey gurigeyga ... Waan argagaxay mana garanayn waxaan sameeyo. Aakhirkii waxaan ku dhacay dhulka daal dartiis wuxuuna igu dhuftay calooshayda, taas oo igu kaliftay inaan xanjo oo qufaco cuntada. Waan naxay, oo mahadsanid! Waa eeyga ugu fiican ee aan waligey rajeyn lahaa aad baan ugu faraxsanahay inaan iibsaday. Wuxuu ahaa duco run ah noloshayda waana jeclahay isaga. '
Logan the Wolamute oo 2 jir ah (Alaskan Malamute / Timber Wolf hybrid)
Logan the Wolamute oo ah eey yar (Alaskan Malamute / Timber Wolf hybrid)
'Inouk wuxuu leeyahay qoor balaaran oo dhumuc weyn leh muruqyo badan, cagaha sagxad leh, sunnayaasha indhaha laba laab ah iyo jaakad ku dhex jirta dhegaha si uu uga ilaaliyo barafka. Aadamiga aamin u ah, illaa intaad tahay alfa labka. Isagu waa nin aad u daacad ah oo ilaaliya aniga, wuxuu jecel yahay dadka iyo carruurta. Qiyaas waa sida aan ku soo barbaariyey. Intaan ogahay, yeey alwaax ah ayaa lagu soo barbaariyey tuulooyinka Inuit, si loo ilaaliyo loona wadaago. Waxa kale oo uu leeyahay jaakad laba jibbaaran, taas oo xilligan oo kale bisha Janaayo ay u soo baxayso sidii qofna meheraddiisa aan haysto boorsooyinkeeda. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qof ogaan kara. Wuxuu cunaa digaag la kariyey, oo ay ku jiraan lafaha, kuwaas oo qayb ka ah cuntadiisa, oo lagu daray hilibka lo'da iyo wanka. Hilib doofaar iyo caano ayaa ka careysiin doona. Si aan runta u sheegno isagu wuu iga cunaa si ka wanaagsan. Laakiin waa saaxiibkay iyo wehelkayga. Waxaan ugu yeeraa Inuck, taas oo keli ahaan ka timid Inuits-ka macnaheedu tahay qof dhab ah. '
iskudhafka mastiffka ingiriiska iyo rottweiler
Eeg tusaalooyin badan oo Wolamute ah
Sawirada Wolamute 1
Liistada eeyaha loo yaqaan 'Wolf Wolf Mix Breed Dogs'
Liistada eeyaha isku dhafan ee Alaskan Malamute
Liistada Eyga Isku-darka eeyaha Isku-dhafan
Macluumaadka 'Hybrid Information'
Aan-Wolfdogs: Aqoonsiga Khaldan
teriil ter iyo shaybaarka isku dhafan
Isku darka Terrieriga yar ee australia
Jack Russell isku darka Pit madow
iskudhafka pitbull iyo bulldog ingiriis
Ey feeryahanno ah oo 4 bilood jira